IP Camera Wireless, IP Camera Security, Smart Kaameerada - InterHome
Waxaan la aasaasay sanadkii 2011, waa mid ka mid ah soo saaraha keentay Smart Home Products Security iyo Shiinaha.
Constant 360⁰ ilaalo dusha Lens, qabsaday wax walba oo duurka ku of view
100% Wire-Free, FHD1080P IP Camera 6700mA 2pcs 18650 batari dabayn Battery daaran time: 10 bilood Battery Isticmaalka time: 4 bilood (10 jeer keebka / maalintii) 8m PIR, 10 IR Day / Night, IP65 biyuhu, APP: Cloudedge
Model NO. Camera kiliinig HIS-WF200MP1 Maqaallo 1MP Resolution & chipset 1MP: GK7102 + GC1034 2MP Resolution & chipset 2MP: GK7102 + GC2053 3MP Resolution & chipset 3MP: NT9851X + SC4236
InterHome Sekuu - IoT Products Manufactuer
Waxaan rajaynayaa gaaro Win-Win iskaashiga aad la.
Waxaan ku siin tayo sare leh, alaabta iyo adeegyada kharash-ool ah si ay macaamiisha oo adduunka ah
InterHome waa qofka aad ku kalsoon tahay in qalabka qalabaynta guriga, nidaamyada, technology, iyo in ka badan. la socdo content ugu dambeeyay iyo rajeyneynaa in laga bilaabo kula baayacmushtari maanta.
Waxaan la aasaasay sanadkii 2011, mid ka mid ah taasoo keentay dhaqanka CCTV Security-saaraha magaalada Shenzhen, Shiinaha. Iyadoo arrimuhu technology ee warshadaha & suuqa baahida, aan hadda inta badan soo saari Smart Home Products Security, iyadoo macaamiisha caalami ah, oo ay ku jiraan kuwa ciyaartoyda madal e-commerce ugu muhiimsan sida Amazon, Newegg, Fipkart ... ECT shaqeeya.
Waxaan rajaynayaa in la gaaro Win-Win Iskaashiga aad la.
6 / F, No. 2, Dhismaha A, Dezhong Industrial Park, Shi bei Road, Bantian, Longgang coal., Shenzhen, Shiinaha
7 maalmood toddobaadkii bilaabo 9:00 am ilaa 6:00 pm
Alarm System , Baby Monitor , Google Smart Camera Kit , Security Camera Or Doorbell, WiFi CCTV Camera Qalabka , Wifi Camera,